iVIGA Tap Factory Supplier | Thepha uMvelisi waseTshayina
Iminyaka eli-13 uMyili wefeksi uMyili
I-imeyile: info@viga.cc Tel:+ 86-07502738266
Iipompo ezimbini zeKhitshi
IiHompe zeKhitshi ezizodwa
Ikhitshi laseKhitshini elineeFilthi
Iibhokhwe zeBhafu enye
IiFaucethi zeshawari zeThermostatic
Iimpompo ezinyuswe eludongeni
Izibambo ezimbini zoMbane
I-Deck Bath Bath Faucets
IiBhombu eziBhaliweyo zeBhokisi
Okufakwe kwiBhokisi yokuhlamba iibhobho
Umgangatho Onyuswe IiBhasiki
Umgangatho Onyuswe IiBhabhathi Zompu
Ukulungiswa kwegumbi lokuhlambela
Isixhobo sokuhambisa amanzi emgangathweni
Icebo elilodwa lokuBanda
Shattaf / Isitshizi
Ulwazi lwe faucet
Eyona mveliso yefenitshala ekhitshini + Okungakumbi
Matte ikhitshi emnyama isitofu sokuxakanisa isixhobo
Matte ikhitshi elimnyama lekhitshi lokuntywila
Matte ikhitshi emnyama ekhitshini
Iteyiti emnyama yesikeyiti emnyama ekhitshini
Uyilo olukhethekileyo lwe-Matte emnyama lukhuphe isitofu esisekhitshini
Matte emnyama vintage antique yehlisa ikhitshi yokucoca ifestile ekhitshini
Imatte emnyama ikhuphe ikhitshi lokucofa ifosili eguqukayo
Ezona mveliso zeKufa yegumbi lokuhlambela + Okungakumbi
Imatte emnyama umgangatho omde opakishwe kwigumbi lokuhlambela isitofu sokuphetha esinye isiphatho
Matte emnyama yokuhlambela isitya sokuhlambela isidibi
Matte emnyama igumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela elimnyama
Matte emnyama yokuhlambela isitya sokuhlambela isitovu
IFaucethi yeshawari yeThermostatic + Okungakumbi
Imattetha emnyama yokuhlambela itomtha emnyama
Imatteti emnyama yokunyanga iseti yokuhlamba
Matte omnyama wokukhanya wokuhlambela ikholam
Matte igumbi lokuhlambela elimnyama lokucoca isitofu sokuhlambela
Iimveliso ze drainer kumgangatho + Okungakumbi
Igumbi lokuhlambela lokuhlambela elingaphantsi kwe-10x10cm
Igumbi lokuhlambela lokuhlambela elingaphantsi kwe-60cm
Igumbi lokuhlambela lokuhlambela elingaphantsi kwe-15x15cm
Umboniso weMiboniso + Okungakumbi
I-VIGA izakuya kwi-26 yama-2021 ye-KBC yoRhwebo eShanghai
2021 Shanghai Ikhitshi kunye neGumbi lokuhlambela
IKHAYA LENKOLO NGO-2016
I-BATIMAT SHOW 2019
IKITCHEN & BATHROOM CHINA 2018
IKHAYA LENYANISO E-CANTON 2018 AUTUMN
IKHAYA LENKOLO NGO-2018
IKHAYA LENKOLO NGO-2017
NGATHI + Okungakumbi
IKaiping City Yamagadi eSanti yokuCoca iCandelo, Ltd. (uphawu iI-VIGAibekwe eShuikou Idolophu, apho yaziwa ngokuba yi "Kingdom of Plumbing and Sanitary Ware" e China. Unobutyebi bamava kwicandelo lophuhliso, uyilo, kunye nokwenziwa kweefompu eziyimveliso yobungcali yokuvelisa iipompo zorhwebo nezaseburhulumenteni kunye nezixhobo.
Iimveliso zafikelela ngaphaya kwama-60 uthotho, olubandakanya iintlobo ngeentlobo zezilobe, ezifana IiBhafu zeSinki zegumbi lokuhlambela, Ii-Faucet zekhitshi, i-Shower Faucets, i-Bathtub Faucets, i-Shower Column, i-Bathroom Accessories kunye ne-Shower Accessories njl. iimveliso zigubungela umxube oshushu nobandayo, impompo enye ebandayo kunye neetephu zeethemostatic zothotho. Ngapha koko, inkampani iyakwazi ukujongana nalo lonke ishishini phantsi kwesampulu yabathengi okanye umzobo (ODM) kunye nenkonzo ye-OEM. Inkampani yeVIGA Faucet ithumela ikakhulu eYurophu, eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMazantsi mpuma eAsia nakuMbindi Mpuma.
Kukho iqela elilawulayo elibalaseleyo elinemibono yamazwe aphesheya aphumelele kwikholeji ephezulu kwi-iVIGA. Okwangoku, iqumrhu lenza inkqubo ephucukileyo yoqeqesho kunye nophuhliso.
Ukunyaniseka, ukusebenza ngokugqibeleleyo kunye nokuvelisa izinto ezintsha yeyona nto iphambili iVIGA ibisoloko inamathela kuye ukusukela oko yasekwa. Ukubonelela abathengi ngenkonzo efudumeleyo kunye nengcinga kunye neemveliso eziphezulu ziyinjongo ye-IVIGA yokusukela. Kwangelo xesha, inkampani iya kubamba ubuninzi bexesha kwaye ibuyele kwinqanaba lehlabathi ngomfanekiso oqinileyo wozinzo lweshishini.
Ukukhokelwa yingqondo "Yobunyani, ukuSebenza ngokuNtleyo kunye nokuYila izinto ezintsha", i-IVIGA ibonelela ngenkonzo ebonakalayo nenomdla kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu zabathengi ziyinjongo ezilandelwa yi-IVIGA. Okwangoku, inkampani iyakubamba ubuninzi bexesha kwaye ibuyele kwinqanaba lehlabathi ngomfanekiso oqinileyo wozinzo lweshishini
iindaba + Okungakumbi
Jongana noMceli mngeni wekhephu kunye nomkhenkce – i-ARROW Sanitary S6 eBukrelekrele kwishishini lezindlu zangasese kuMceli mngeni wokuQala oBande kakhulu.
Ngexesha leMidlalo yeOlimpiki yaseBusika, i-ARROW yaphehlelela lo mceli mngeni wangaphandle wokubanda okugqithisileyo, ngaphezu koko, idale uvavanyo lokuqala lwangaphandle olugqithisileyo kushishino lwezococeko. I-ARROW yokuhlambela yangasese ekrelekrele yoyise imeko ebandayo yangaphandle. Yona... Funda ngokugqithisileyo
Ngo-2021, ukuThunyelelwa kwe-China kunye noRhwebelwano lokuThumela ngaphandle kwiCeramics zococeko lwaluyi-64.667 yebhiliyoni yeYuan, ukonyuka kwe-5.46% yoNyaka-ngoNyaka.
Ngokwedatha yamasiko ehlanganiswe yiKitchen & Bath Information, ngo-2021, urhwebo olupheleleyo lokungeniswa kunye nokuthumela ngaphandle kweemveliso ze-ceramics zococeko (izixhobo ze-porcelain ezisisigxina zococeko kunye nezixhobo ze-ceramic ezisisigxina zococeko) e-China yayiyi-64.667 yebhiliyoni ye-yuan, ... Funda ngokugqithisileyo
Ukukhula bekungama-31.9%. Ukukhula okuPhakamileyo kokuFakelwa kweMibhobho yaseJamani ukuya eTshayina ngo-2021
Kungekudala, i-VDMA (i-Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) ibhengeze ukusebenza kwe-German building accessories industry in 2021. Ngokubanzi, ukuthengiswa kweshishini ngokubanzi kunyuke nge-8%, kunye nemarike yaseJamani ikhula nge-6% kunye nokuthengiswa kwamanye amazwe nge-10%. ... Funda ngokugqithisileyo
Ulwazi lwe faucet + Okungakumbi
Ndingaqiniseka njani ngobungakanani besi sihambisi? Ngoncedo lwe-nickel kunye nedime, unokufumana ngokulula ubungakanani be-aerator yakho. Kuqala susa okufakelweyo kunye newasha yangaphakathi ye-aerator. Cwangcisa i-nickel ngaphezulu kwe-aerator, kwaye ukuba iphantse yangumjikelo ofanayo, i-aerator bubungakanani obuqhelekileyo. Ukuba ayisiyiyo ... + Funda ngaphezulu
Yintoni i-Faucet ebanzi yasekhaya？
Ngokomlinganiso wofakelo lomngxunya wompompo, itepu yesitya ineendidi ezi-3 zombhobho wesingxobo ongumbhobho omnye, iziko elinemingxuma emibini yokufaka ithumbu lombhobho wesentimitha esi-4 kunye nomngxunya omathathu umngxuma osisi-8 intshi yomphanda wesitya. Isitya sokuhambisa umbhobho esinomngxunya omnye sifakelwe umbhobho omnye womngxuma. Ubukhulu buqhele ukuba ngama-35mm. le basi ... + Funda ngaphezulu
Ispout eside sifikelela kumbhobho wasekhitshini onemisebenzi emi-2 yesitshizi
Imisebenzi emibini yeABS yokutshiza itepu yasekhitshini ngumxhubi ophakamileyo wekhitshi. i-chrome igqityiwe ukuhlangabezana neemfuno zesingxobo selizwe. Ngaphezulu, ine-1.5 yemitha yokukhupha umbhobho, unokucoca kwaye uthathe amanzi ngokulula. ikwangumxube wokugcina amanzi ekhitshini. sebenzisa i-neoperl honeycomb aerator。 & nbs ... + Funda ngaphezulu
Ukuhamba kwamanzi ngequbuliso emva kokuba ishawa icinyiwe ayisiyo ngxaki esemgangathweni.
Ukuhamba kwamanzi ngequbuliso emva kokuba ishawa icinyiwe, ayisiyongxaki esemgangathweni Ukulungiselela ukuthuthuzela kokuhlamba, izitshizi zentloko zeshawari zinkulu kakhulu, kwaye ubukhulu bentloko yeshawari buthetha ukuba amanzi akho emva kokucima itepu. Amanzi kwimibhobho ephezulu yokutshiza kunye neyeshawa anokuhamba ... + Funda ngaphezulu
Indlela yokuthengwa kwezixhobo zegumbi lokuhlambela
Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlambela, kuncinci njengezinto zoncedo, zizonke izinto eziyimfuneko zokwakha igumbi lokuhlambela elifanelekileyo. Abantu bakholisa ukungahoyi ukuthengwa kwezixhobo zangasese. Kubalulekile ukuba wazi ukuba ngaphandle koncedo lwezixhobo ezincinci zehardware, akunakwenzeka ukwenza igumbi lokuhlambela ... + Funda ngaphezulu
Gcwalisa iseti yezakhono zokuthenga kwiipompo zangasese, iishawa, kunye nemisele yaphantsi.
Gcwalisa ingqokelela yeepompo zangasese, iishawa, kunye nemijelo yaphantsi yomgangatho Iipompo zegumbi lokuhlambela, iishawari kunye nemijelo yomgangatho zibaluleke kakhulu izixhobo zehardware. Masiqwalasele iindlela ezintathu zokuthenga. 1. Thenga iifompo zangasese Khetha ngokokusetyenziswa kunye nemeko yofakelo: Ukuba inye yamanzi ... + Funda ngaphezulu
Uzahlula njani ukomisa kunye nokumanzi kwee-4 zeemitha ezi-XNUMX zegumbi lokuhlambela elincinci?
Uyilo lommandla owomileyo owomileyo kwindawo yokuhlambela okwangoku luyimfuneko kubantu abaninzi kuyilo lomhombiso, kodwa kwezinye iiyunithi, kunzima ukuyila igumbi lokuhlambela njengokwahlula okumanzi omanzi. Sukuba nexhala, nangona esona sithuba sincinci, asikuthinteli ukuba ube nelulwane kwaye womile ... + Funda ngaphezulu
Kufuneka ndenze ntoni xa umfafazi afefa ngamanzi amancinci kwaye avuza?
Kufuneka ndenze ntoni xa isitshizi sokuhlambela sinamanzi amancinci, ukuvuza okanye ukuvaliwe? Iishawari zihlala zisetyenziswa ekhaya. Kuthekani ukuba ngenye imini ngequbuliso ufumanisa ukuba amanzi ahamba kancinci kakhulu, ishawa iyavuza, okanye ishawa ivaliwe? Ngaba uyazi ukuba ungayilungisa njani? Ngaba ingunobangela? Makhe sijonge indlela yokujongana ne-wi ... + Funda ngaphezulu
Igolide eBhrashi, iSensor, iChrome, itephu emnyama yasekhitshini engenasinxibo
Ikhitshi-Iipompethi - Ithumbu enye yekhitshi
Iimpawu eziMbini zeKhitshi eziDibeneyo
Tsala iifreyiti zaseKhitshini
Isasazekile, iGolide, Brass, Ingxangxasi yangasese Iifinki zokuntywila, Amampunge
Abaxube beBasnia eValiweyo
I-Deck ye-Basin Faucets ekhwele
Umxube weBhasile yeBhokisi ye-Basin
Umxube weBhokisi yokuThintela iMveliso
Umxube weBass Mounted Basin
Umgangatho Onyusiweyo Abaxubeki Bath | Bathtub Shower Faucet
I-1st International Saitary Ceramics Giant ukunqumamisa ukusebenza eRashiya
Utyalo-mali kunye neNkxaso-mali | UNanan uzimisele ukwandisa iDigital Sanitary Ware Industrial Park nge-800 yezigidi, iSwell Sanitary Ware eNtsha yeKhaya eNtsha, eDongtao Phuma eRitai Taoci.
IKaiping City Yamagadi eSanti yokuCoca iCandelo, Ltd. (uphawu iVIGA) ngumenzi oqeqeshiweyo ukuvelisa izixhobo zentengiso nezorhwebo kunye nezixhobo.
Yongeza: 38-5, 38-7 Jinlong Road, Jiaxing Zone Industrial, Shutikou Town, Kaiping City, Provinsia Guangdong, China
Ifeksi: + 86-750-2738233
Copyright © 2022 iVIGA tap Factory Supplier Onke Amalungelo Agciniwe.
Facebook	Twitter	Google	Twilley	YouTube	Instagram
Ingxoxo ebukhoma X